Mon, Apr 23, 2018 | 17:13:57 NST
क्वालालाम्पुरको एयरपोर्टमा यसरी लुटियौं मलेसियामा पटक पटक गरी झण्डै ८ वर्ष बसें । यो अवधिमा पेनाङमा रहेका उत्पादनमुलुक र रेष्टुराँहरुमा काम गरें । सुरक्षाका हिसाबले मलेसिया त्यति राम्रो मानिन्न । किनभने त्यहाँ हामी जस्ता कामदार जतिसुकै बेला आक्रमणमा पर्न सक्थे । लुटिन सक्थे । तर ८ वर्ष बस्दा मैले त्यस्तो केही भोग्नु परेन । पछिल्लो पटक म मलेसिया गएको साढे चार वर्ष भएको थियो । कम्पनी राम्रो नभएकाले त्यहाँ बस्नको कुनै अर्थ नहुने ठानेर ‘फिनिस’मा नेपाल आउँदै थिएँ । २१ जुलाई २०१७ का दिन मालिन्डो एयरलाइन्सबाट नेपाल फर्कन... पुरा पढ्नुहोस
डोल्मा शेर्पालाई फाँसीबाट बचाएर घर फर्काउनेहरुको नाममा विदेशमा काम गरेर फर्किएका महिला र उनीहरुका परिवारको हकहितका लागि काम गर्न थालेको १५ वर्ष भयो । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने, पिडामा परेर फर्किएकालाई आवासको व्यवस्था गर्नु, विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्नु र दलालबाट ठगिएकालाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने काम गरियो । १० वर्ष पहिले हाम्रो संस्थाले आप्रवासी महिला कामदारको विषयमा महिला वकिलहरुलाई अभिमुखिकरण दिएको थियो । त्यसै समयमा माइती नेपालमा आवद्ध एकजना वकिलमार्फत एउटा मुद्दा आयो । पीडित थिइन् डोल्मा शेर्पा । सिन्धुपाल्चोककी डोल्मा ला... पुरा पढ्नुहोस
​रामे दाइ अब त घर फर्क कहिलेसम्म रमाइलो गरेर हिँड्छौ यो बिरानो मुलुकको सहरमा ए रामे दाइ दिनरात नभनिकन रगत र पसिना बगाएर यसो दुई चार पैसा कमाउँछौं कहिलेसम्म यसरी तिमी यो बिरानो मुलकको सहरमा रमाउँछौ तिमीले गाउँ छोडेर हिँडेको पनि अब त १२/१३ वर्ष पूरा भयो तिमीले घरबाट बिदा लिएर हिँडेका बखतको तिम्रो त्यो बामे सर्दै हिँड्ने छोरा हरिकृष्ण आज लक्का जवान भएको छ कसैले तिम्रो बारेमा सोध्यो भने बाबा विदेशमा हुनुहुन्छ मात्रै यति छ उसको जवाफ कस्तो होला तिम्रो ढुङ्गा जस्तै कठोरता भएको मन कहिलेसम्म... पुरा पढ्नुहोस
७ वर्ष भयो साउदी बसेको, बाहिर घुमेको छैन मेरो बासस्थान झापा हो । म हाल साउदी अरबको जुबैलस्थित रोयल कमिसनको अरबियन थर्मल एयर इन्डस्ट्रिज कम्पनीमा काम गर्दैछु । म सन् २०१० को जनवरी १८ तारीखमा आएको हुँ । जनवरी १९ तारीखमा काम गर्न थालेको थिएँ । मलाई सुरुमा सुपरभाइजरले क्लिनिङ्गको काम गर भनेर लगाउँनुभयो । त्यतिबेला मेरो तलव ८ सय रियाल थियो । मेरो २ वर्षको कन्ट्रयाक सकियो । अर्को दुई वर्षे कन्ट्रयाक १ सय ५० रियाल थपेर ९ सय ५० रियाल तलव पाउने गरि आयो । मासिक ९ सय ५० रियाल थापेर अर्को दुई वर्ष सकियो । फेरि थपिएको दुई वर्षे कार्यक... पुरा पढ्नुहोस
अबको चुनावमा हामीले विदेशबाटै भोट हाल्न पाउनु पर्छ निर्बाचन आयोगले फोटो सहितको मतदातासूची अद्यावधिक गर्ने बेला हामी प्रबासमा रहेका कारण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्नबाट बन्चित भयौं । प्रवासमै रहेर अद्यावधिक गराउने कुनै बिकल्प नपाउँदा हामी धेरै प्रवासी नेपाली नागरिकहरूको मतदाता सूचिमा नामै रहेन । म स्वयम तिनै पीडित र उपेक्षित मध्यमा परें । जो आफ्नो गृह जिल्लामा स्थानीय चुनाव भैरहेका बेला नेपालमै पुगेको भएतापनि मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन । अब फेरी निकट भविश्यमै प्रदेश र केन्द्रीय सांसदको चुनाव हुन गैरहेको छ । ... पुरा पढ्नुहोस
​तपाईंको बोली र व्यवहारले परदेशीका परिवारलाई पीडा थपेको त छैन ? सर्लाहीकी अलिमा खातुन (नाम परिवर्तन)लाई राम्रो लुगा लगाएर हिँड्न मन लाग्छ । तर चाहेर पनि उनले राम्रो लुगा लगाएर हिँड्न पाएकी छैनन् । कारण उनका श्रीमान छैनन् । मलेसिया गएका अलिमाका श्रीमानको उतै ज्यान गयो । त्यसपछि उहाँको लवाईमा परिवर्तन आयो । अलिमाले आफूलाई परिवर्तन गर्नुको कारण थियो आफन्त र गाउँलेको कुरा काट्ने प्रवृत्ति । राम्रो लुगाा लगाएर हिँडेको देख्ने बित्तिकै आफन्त र गाउँलेले कुरा काट्न थालिहाले । ‘श्रीमानको मृत्यु भइसक्यो कसलाई देखाउन चिटिक्क परेर हिँडेकी होली’ ... पुरा पढ्नुहोस
आफ्ना प्रतिनिधि आएपछि अब त नागरिकले काम खोज्न विदेशिनु पर्दैन होला नी हैन ? लगभग दुई दशक पछाडि भएको स्थानीय तहको चुनाव र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको सरकारले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनिरहेका बेला म जस्ता युवाले अब त काम खोज्दै विदेश जानु पर्दैन होला भन्ने सोचेका होलान् । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावबाट चुनिएका प्रतिनिधिको पाँच वर्ष अवधी सकिएपछि जनप्रतिनिधि बिहिन भएको स्थानीय निकायले विकासको कामदेखि हरेक कुरालाई कर्मचारीमा मात्रै सिमित भएकोले देशमा बेरोजगार बढेको र विकासको गति धीमा भएको सबैलाई जानकारी छ । त्यसैले जनयुद्धको कारण देखाउँदै रोजगारीको लागि विदे... पुरा पढ्नुहोस
कतारको अवस्थाका बारेमा सरकार र दूतावासले अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ लुटपाट, रिंगिटको अवमूल्यन लगायतका कारणले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक मलेसियाको गन्तव्य परिवर्तन भयो । नेपालीको रोजाइ साउदी अरब बन्न थाल्यो । केही वर्ष अघिसम्म नेपाली कामदार साउदी जान रुचाउँदैनथे । गएको वर्ष आर्थिक समस्या परेपछि फेरि नेपाली कामदार साउदी जान डराउन थाले । सन् २०२२ को विश्वकप फूटबल कतारले आयोजना गर्ने भएकाले पनि कतार नेपालीको रोजाइमा पर्‍यो । तर पछिल्लो समय कतारले आतंकवादलाई सहयोग गरेको भन्दै छिमेकी देशले कुटनैनिक सम्बन्ध तोडेपछि उनीहरुले कतारलाई नाकाबन्दी लगाएका छन् । यदि कतार... पुरा पढ्नुहोस
बाकस भित्रको युवा ( कविता ) छातीमा स्वाभिमान बोकेर निधारमा पसिनाको बाढी बगाउँदै मरुभूमीको तापमा आइ सहँदा त्यसबेला..... आमाको आशिष बुबाको आदेश बहिनीको रुवाइ मेरो विदाईमा पाठोले म्या म्या गर्दै खुर बजायो तर घरको छानो चुहिएर गिज्याउँदै टाउकोमा बजारिन्छ हिड्ने बेलामा दुई जिउ कि श्रीमतीलाई पेटमा सुमसुमम्याउँदै जीवनको यथार्थ भोलि जन्मिने छोरीलाई टक्क रोकिएका आँसुले सोध्ने छन सानीले मिरमिरेमा आँसु पुछिरहेकी उसकी आमालाई आँगनमा देखिएको बाकसले बताउनेछ बैंस ढल्नुको अर्थ जुन बेला म अठार वर्षमा बाक... पुरा पढ्नुहोस
परदेशमा अस्पतालको बेडमा सुत्दा आमा अगाडी भैदिए हुन्थ्यो झैं लाग्थ्यो साच्चिकै मेरो मन चञ्चल हुदै थियो । आत्तिएको थियो । परदेशमा एक्लोपनले खाँदै थियो । अर्काको देशमा कसको के वास्ता र । पसिनाले ज्यान निथ्रुक्कै भिजेको थियो । परिवारको सम्झनाले मन आत्तिरहेको थियो । कति दिन यसरी दिन बिताउने परदेशमा कमाउन आएको मन र दिमाग थिरमा बस्न छाड्यो । मलाई मौसमी रुघाखोकी र ज्वरोले सताएको थियो । नीजि क्लिनिकमा गएर औषधि ल्याएको थिएँ । केहि समय आराम गर्नु भनेको थियो । तर मलाई एक्लै कोठामा बस्ने मनै थिएन् । सन्चो नभएर पनि होला घरको साह्रै याद आइरह्यो । साथीभाइले विदेशमा कमा... पुरा पढ्नुहोस
आपतमा परेका परदेशीको सहयोगी बन्दा ... सानैदेखिको रहर थियो पीडामा परेकालाई सहयोग गर्ने । प्रवासी नेपाली समन्वय समिती (पिएनसिसी)मा काम गर्दा मेरो त्यो इच्छा पनि पूरा भयो । काम गर्न थालेको केही समयमै मलेसियामा घाइते भएर आएका पीडितको परिवारसँग काम गरेको थिएँ । पीडितको आर्थिक अवस्था देख्दा मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो । उनको मात्र हैन वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीको यस्तै अवस्था छ । त्यसको केही समयपछि साउदीमा मृत्यु भएका दाइको शव नेपाल ल्याउन भर्खर १६ वर्ष लागेका भाइले गरेको दुःख देखें । शव नेपाल आएपछि पनि फेरि साउदी नै फर... पुरा पढ्नुहोस
‘साहुको कुटाइले मर्ने भएँ’ भनेर भ्वाइस म्यासेज पठाउने चेलीको उद्दार कसले गर्ने lsquo;तपाईं त मेरो जेठाजुको छोरा जस्तै लाग्यो तपार्इंको घर कहाँ होला ?’ मेरो फेसबुकमा अपरिचित व्यक्तिको भ्वाइस म्यासेज आयो । उनी मेरो फेसबुकमा साथी पनि थिइनन । नचिनेको मान्छेको यस्तो म्यासेजले छक्क परें । प्रोफाइल खोलेर हेरे । प्रोफाइल फोटोमा फूलको तस्बिर राखिएको थियो । नाम पनि अर्कै लाग्ने । नेपालीले राख्ने जस्तो नाम थिएन । साथीको लिष्ट हेरें । मेरा गाउँले साथीहरु पनि थिए । आफन्तै पो हो कि जस्तो लाग्यो । मैले अफ्नो बारेमा नेपालीमा लेखेर पठाए । उनले बुझिन कि बुझिनन मैंले पत... पुरा पढ्नुहोस
परदेशबाट फर्कंदा पाँच दिन हिँडेर घर पुगें २०६१ वैशाख २८ गतेको मेरो यात्रा बिर्सन खोजे पनि कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बनेको छ । रोजगारीका क्रममा त्यति बेला म भारतको गाजियावादमा थिएँ । झण्डै डेढ वर्ष भैसकेको थियो परिवारबाट टाढिएको । लामो समयपछि छुट्टि पाउने पाउने भएपछि घर आउने तरखरमा थिएँ । मेरो साथमा सँगै काम गर्ने साथीले गाउँमा आफन्तलाई उपहार पठाउने भए । साथीहरुको सामन गरी झण्डै ३० किलो भयो । धेरै पछि घर फर्कन पाएकोमा मन खुसी थियो । तर साथीभाइसँग छुट्टिनु पर्दा दुखी पनि थिएँ । घर आउने भएपछि बिदाइका बेला साथीहरुसँग सानो जम... पुरा पढ्नुहोस
गोविन्द तिवारीले पैसा मात्रै ठगेनन्, मलाई पनि दलाल बनाए म १८ वर्ष पहिले देखिनै पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्छु । मेरो कम्पनीको शाखाअकेरिकाको न्युयोर्क र युरोपका देशमा पनि छ । विजनेस बाहेक म प्रिसियस नेशनल कलेजको प्रमुख पनि हुँ । करिव ८ सय विद्यार्थी त्यहाँ पढिरहेका छन् । म अफिसमै थिएँ । सन् २०१२ देखि नियमित टिकट काट्ने मेनुका थापाले मलाई भनिन्, गोविन्द तिवारी भन्ने मान्छेले टिकट काट्दै छ । उसको नाममा टिकट दर्ता गरिदिनुस् फरक पर्दैन । नेपालमा आएपछि पैसा दिन्छ भनेपछि मैले उनको कुरामा विश्वास गरें । गोविन्दले नेपाल आएपछि तिर्छु भनेको थियो ।... पुरा पढ्नुहोस
श्रीमानको विदेशमा ज्यान जाँदा रोएर बसेको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो ? फोनमा कुराकानी गर्दा दुई वर्षमा अब विदेश नफर्किने गरी घर आउँछु भन्नुभएको थियो । तर घर आउन पाउनुभएन । उहाँको साउदीमै ज्यान गयो । ऋण खोजेर पठाएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ चाहिँ उहाँले तिर्नुभएको थियो । ऋण तिरेर के गर्नु अब त उहाँ नै रहनुभएन । ६ वर्षको छोरा अजित र म असहाय भयौं । त्यतिबेला सबैले सान्त्वना दिन्थे । के गर्नु यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाएँ अरुका छेउमा । सबै मानिसहरुको अगाडि मन बुझाएपनि आफूले आफैंलाई कमजोर भएको महसुस गर्दथे । अब मेरो र छोराको जिन्दगी के गर्ने होला भन्... पुरा पढ्नुहोस
​समाचार छापिएपछि छोराले गाली गर्न भए पनि फोन त गर्‍यो ! छोरालाई विदेश पठाएर हामीले के पायौं ? घरको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला भएको छोरा मलेसिया गएपछि हामीले पाएको भनेको घर चलाउने जिम्मेवारी र चिन्ता मात्रै हो । विदेश गएको छोराले कमाउँछ भन्ने आशा थियो तर फोन नै गर्न छोड्यो । छोरा विदेशिएको जति समय बढ्दै गयो उति नै उसको मन कठोर हुँदै गयो । अभिभावक भएकोले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी दुःख गरेर भए पनि पूरा गरिरहेका छौं । गर्भवती छोडेर गएको हो छोरा, हामीले बुहारीको रेखदेख र स्याहार गर्यौँ । अहिले त नाति पनि ५ वर्षको भइसक्यो । नत बाबुले छोराको मुख देख्... पुरा पढ्नुहोस
​वैदेशिक रोजगारलाई दुःख होइन सिकाइको स्रोत बनाउँ वैदेशिक रोजगार रहर होइन बाध्यता हो । देशमा बढिरहेको बेरोजगार, राजनितिक अस्थिरता बन्दह डताल विभिन्न सास्याले गर्दा अन्तिम विकल्पको रुपमा छान्ने गरेको पाईन्छ । हरेक व्यक्तिले आफ्ना सन्तान आफूबाट टाढा भएको हेर्न चाहँदैनन् । तर बिडम्बना जे नहोस भन्यो त्यही हुन्छ । वैदेशिक रोजगार सुन्दा सरल छ । विदेश जाने कमाउने ल्याउने तर त्यही कुरा गर्न सयौं गुणा कठिन छ । विदेश हामीलेसोचे जस्तो हुँदैन अनि छैन पनि । नीतिनियम मान्नेदेखि अनुशासनमा बस्ने वैदेशिक रोजगारका प्रमुख विषय हुन् । वैदेशिक रोजगारम... पुरा पढ्नुहोस
तपाईले बोलेका कुराले कस्तो तनाव दिन्छ बालबालिकालाई ? १२ वर्षका समिर (नाम परिर्वतन) आफ्नो बुवासँग एकदमै झुमिनुहुन्थ्यो । तीन वर्ष अघि समिरका बुवा मलेसिया जानुभयो । मलेसियाबाट फर्किंदा उहाँले पैसा त लिएर आउनुभयो तर सँगै एड्स पनि लिएर आउनुभयो । त्यो कुरा समिरले केही समयपछि थाहा पाए । एकदिन समिरले घरमा कुराकानी हुँदा आफ्नो बाबा अब केही दिनको पाहुना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए । त्यसपछि त समिरले बाबाले अब जुनसुकै बेला हामीलाई सँधैका लागि छोडेर जाने हो ? भनेर सोध्न थाले । त्यसको केही समयपछि समिर कम बोल्न थाले । अहिले पनि उनको अवस्था... पुरा पढ्नुहोस
​सीप हुनेलाई सम्मान, सीप नहुनेलाई न काम न सम्मान केही वर्ष अघि म भारतमा काम गर्थें । स्वदेशमा कुनै अवसर नदेखेपछि जीविकाको लागि भारत जानु मेरो बाध्यता थियो । तर भारतको रोजगारीले धेरै प्रगति होला जस्तो लागेन । त्यसैले खाडीको देश जाने सोच बनाएँ । तर, कहाँ जाने ? कसरी जाने केही थाहा थिएन । तर मेरो छिमेकी दाई सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मा काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई वैदेशिक रोजगारी तथा त्यसका राम्रा र नराम्रा कुराका बारेमा बुझाउनुभएको थियो । उहाँले मलाई विदेश जाने भए सीप सिकेर मात्रै जान सल्लाह दिनुभयो । उहाँकै सल्लाहमा मैल... पुरा पढ्नुहोस
लेवनान समुन्द्रको छेउमा रहेको सानो देश लेवनानको राजधानी बेरुत हो । लेवनानमा ९ हजार भन्दा धेरै नेपाली कामदार... थप जानकारी